Sary avy any Indonezia: Manahoana, tsy miasa intsony ilay izy!
(Marihina fa tamin'ny volana Novambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Manahoana, tsy miasa intsony ilay izy” avy amin'i Budi Sukmana Mpitondra tuk-tuk any Bandung, Java Andrefana, Indonezia, manosika ny fiarany sy ny mpandehany mba tsy ho lena mandritra ny oram-be tampoka. Fanamarihana: Hitanay ity sary ity satria nanamarika izany niaraka tamin'ny...
Sary avy any Japana: Oko
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Oko” avy amin'i MC MasterChef Fivarotan-tsakafo kely/mivarotra paty any Oko, tanàna kely akaikin'i Hiroshima. Tsara ny manamarika fa natao handrahoan-tsakafo ny ankamaroan'ny latabatra malalaka eo anoloana.
Sary avy any India: Mpanao fivahinianana masina
Azia Atsimo06 Novambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Mpivahiny masina” avy amin'i Mor
Eoropa Afovoany & Atsinanana06 Novambra 2018
Sary avy any Japana: Sushi
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Sushi” avy amin'i Sekihan Ny zatovovavy iray mandinika ny sushi tao amin'ny trano fisakafoanana iray tany Tokyo.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Novambra 2018
Sary avy any Maraoka : Lakana Fanjonona
(Marihina fa tamin'ny volana Novambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Lakana Fanjonoana” avy amin'i Andrew Wales Ny seranan'ny mpanjono any Essaouira, Maraoka.
Sary avy any Thailandy: Ny dihy tigra
(Marihina fa tamin'ny volana Novambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Dihy Tigra” avy amin'i Scruffy Dan Mpandihy iray miaraka amin'ny saron-tava tigra mivezivezy manerana ny parady tao Bangkok.